Iikitikiti zamahhala kwi-'Late Show Late Show kunye noJames Corden '
Hlalani kwiAphulaphuli kwaye Jabulela ukuhleka
Kulula ukufumana amathikithi akhululekileyo "kwiLate Show late" kunye noJacob Corden. " Ufuna nje ukubhalisela umhla okhoyo kwaye ube nomonde.
I- CBS eyaziwayo ngokuhlwa ebusuku ibonisa umoya ngeeveki zeeveki kwaye ithotshwe kwangaphambili ngaloo mini. Ithawulwa kwiHollywood kwisigaba kwi-CBS iTekonesi yeSixeko, efumaneka kwi-7800 eBeverly Boulevard eLos Angeles, eCalifornia.
UJames Corden wathatha umboniso ngoMeyi 2015 ukuba atshintshe uCraig Ferguson .
Umgca we-show-up uquka uluhlu olukhulu lweendwendwe ezidumileyo kunye nabaculi kunye neCorden eyaziwa ngama-antics akhe amakhulu, ngokukodwa amavidiyo anentsholongwane njengeCarpool Karaoke.
Amaphukithi amahhala aphezulu "kwiLate Show Late kunye noJacob Corden"
Ukufumana amathikithi okanye ukugcinwa kulula, mane ulandele le nyathelo.
Unokufumana amathikithi akhululekile ngokuthumela isicelo sakho kwi-intanethi nge-1iota, enika ithikithi yamahhala yokuthetha imibukiso kunye neenkqubo zethelevishini eLos Angeles.
Xa ulapho, uyacelwa ukuba ukhethe usuku onokuthanda ukuya kuyo ukusuka kumhla eboniswe. Cofa ngomhla wokufikelela kwifom ye-intanethi yokuthumela.
Khetha ukuya kumatikiti amane. Uyakucelwa kwakhona ukuba ubhalise kwiziko eli-1 lokufumana ithikithi.
Gcwalisa igama lakho, ubudala, inombolo kwinxalenye yakho, inombolo yefowuni, idilesi ye-imeyile kunye nesizathu sokuba unomdla wokuba kwisilaleli se-studio.
Qaphela ukuba akukho ukuvunyelwa okuqinisekileyo kumboniso. Abaniki bamatikiti bayamkelwa kwi-first-come, isikolo sokuqala. Kungcono ukufika kusasa kunokuba ufike ngexesha elifanelekileyo. Umboniso ngokuqhelekileyo amateyipu nge-4 ntambama
Umboniso unokucinywa kunye nezizathu ezahlukahlukeneyo. Ukuba oko kwenzeka, uya kufuneka uqale inkqubo kwakhona. Kwakhona, iindwendwe zihlala zitshintsha.
Iingcebiso Zakho "Uboniso Lwasemva Kungekudala"
Ukubonisa iintetho zinikela ngamatikiti akhululekile kuba bathanda abaphulaphuli abapakiweyo. Kodwa ngenxa yokuba bekhululekile, kunjalo, akuthethi ukuba akudingeki 'usebenze' kubo.
Abantu abaninzi abaye baye kwi "Late Show Late Show" baye babelana nawe kufuneka ulungele ukuma kumgca, nokuba unayo ithikithi. Kufuneka ufike kwangethuba ukuzama ukubamba isihlalo kwaye ugqoke izicathulo ezipholileyo. Yilungiselele ukuba ilanga elitshisayo kuba umgca ubeka ngaphandle. Sekunjalo, kuthiwa abasebenzi banikezela iibrawule ukukunceda uhlale upholile.
Kwakhona, ungamangalisi ukuba abasebenzi bathabatha abantu abancinci, abaqhawulayo ukuba bahlale phambi kwabaphulaphuli, nokuba kunjalo. Lo ngumabonwakude, emva koko konke!
Kufuneka ube no-16 okanye ngaphezulu ukuya kuzo. Wonke umntu uya kufuna ukuzisa i-ID yesimboli karhulumente ukuba avunyelwe.
Cinga ukugqoka ngokukhawuleza, kuba ungabonakala kwikhamera. Zama ukuphepha ukugqoka iifutshane, ii-T-shirt, iihappy, okanye iimpahla ezimhlophe. Hlanganisa kwisihlwele kwaye ubukeka kakuhle, kodwa akukho mfuneko yokuphuma konke. Jonga abaphulaphuli kwimiboniso embalwa uze ufumane ingqiqo efanelekileyo yendlela yokugqoka.
Amatikiti ayengadluliswanga kwaye ayinakuthengiswa okanye athengwe. Musa ukuthenga amathikithi kumboniso njengoko mhlawumbi abayi kulungela emnyango kwaye bahlala bengenkunkuma yemali.
Akukho mntu usebenzisa iifowuni, ii-pagers, iikhamera, iirekhodi ezivakalayo okanye ezinye iifowuni zokurekhoda, imithwalo, izikhwama ze-backpacks, okanye iifowuni ezinkulu zokuthengwa ziya kuvunywa kwi-show.
Abaphulaphuli badla ngokuphindaphindiweyo. Ukungeniswa akuqinisekanga, nangona unetikiti.
Iminyaka Yama-Golden: Iingcaphulo Ngomhlalaphansi